Kooxda Man United oo dib ugu soo laabtay Magaalada Manchester kaddib guuldarradii ka soo gaartay Arsenal.. + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 11 March 2019. Xiddigaha kooxda kubadda cagta Manchester United iyo maamulka kale ee naadiga ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada Manchester kaddib guuldarradii ay xalay ku qaabileen caasimadda Ingiriiska.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer iyo shaxdiisa Manchester United ayaa sawirro laga qaaday iyagoo ka soo laabtay Magaalada London ee caasimadda Waddanka Ingiriiska kaddib guuldarradii xalay ka soo gaartay kooxda Arsenal.
Man United ayaa ku guuldarreysatay inay sii joogteyso guuldarro la’aanteeda xiriirka ah ee kulamada horyaalka kaddib markii ay booqdeen garoonka Emirates, Gunners ayaana ku soo garaacday 2-0.
Labada gool ee looga adkaaday Man United waxaa u dhaliyey kooxda Arsenal labadeeda laacib ee Granit Xhaka iyo Pierre-Emerick Aubameyang, taasoo sababtay in ay Man Utd hoos uga soo dhacaan booska kaalinta afaraad ee looga qeyb galo Champions League.
Kooxda Manchester United ayaa haatan fadhisa kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League waxaana ay labo dhibcood ka dambeysaa Arsenal kaddib guuldarradii ay xalay ka soo qaadatay garoonka Emirates.
Safarka kooxda Manchester United ayaa ahaa mid dhulka ah, waxaana ay Tareen ka soo raaceen Magaalada London iyagoo ku soo gaaray Magaalada Manchester.